पुनः पढ्दै। Reasons कारणहरू किन हामी यो गर्छौं। कि हैन। | वर्तमान साहित्य
पुनः पढ्दै। Reasons कारणहरू किन हामी यो गर्छौं। कि हैन।
सबै वर्ष पढ्न को लागी आदर्श हो, तर गर्मी यो सायद तारा समय हो। खाली समय, शान्ति, अनुकूल ठाउँहरू ती लिनको लागि पढाइ जुन हामी शताब्दीयौंदेखि पेन्डि। छ। वा किन छैन? एक बनाउन को लागी पुनः पढ्दै ती पुस्तकहरू जुन एक दिन हामीसँग विशेष तरीकाले आएका थिए। अनि त्यो मनसाय हामी आफैंलाई फिर्ता लिन वा तिनीहरूलाई सम्झन दिन्छौं? वा हुन सक्छ हामी कहिल्यै पढेका छैनौं। हेरौं
4 चिन्ता र भीड
5 असफल रूपमा
यो त्यो पुस्तक हो बचपन वा युवावस्था। एक जो हामी छक्क, विचलित वा चकित भएका थियौं। हामी बच्चाहरू वा किशोर-किशोरीहरू थियौं जसले सबै प्रकारका विधाहरू पढ्न शुरू गर्थे। त्यो हामीलाई काकी, चचेरो भाई, साथीले दिएका थिए। त्यो एक मा पढ्नुपर्‍यो Cole दायित्व द्वारा र यो एक महान खोज हुन। तिनीहरूले उहाँमा उनको बारेमा कुरा गरे इन्स्टि, वा तपाईंले यसलाई साहित्यको सूचीमा पढ्नुपर्‍यो।
हुनसक्छ यो एक थियो clásicoयद्यपि ती गाह्रो थिए र हामी मध्ये धेरैजना बोरिंग थिए, तर ... कसलाई थाहा छ। हुनसक्छ यो थियो सम्पादकीय बमोजेल त्यो वर्षको। म आफैले पढ्छु परफ्यूमप्याट्रिक स्यासाइन्डले १ 1987 .XNUMX को गर्मी दिउँसो। र जीन-ब्याप्टिस्ट ग्रेनौइलले पहिलो काल्पनिक पात्रहरूको सूचीमा शीर्ष स्थानमा राखे जुन मेरो काल्पनिक पाठकमा देखा पर्न थालेको छ।
र समय बित्दै जाँदा यो हामी चाहान्न सक्छ ती क्षणहरू पुनःप्राप्त गर्नुहोस्। पुन: पत्ता लगाउनुहोस् अनुभूति उमेर बाट।
कहिलेकाँही राम्रो पुस्तक पुनः पढ्न वर्षौं लाग्दैन। र यद्यपि आश्चर्य प्रभाव पहिले नै हराइसकेको छ, सम्भव छ कि यो पुनः पढ्नेमा हामी फेला पार्दछौं नयाँ। त्यो अध्याय, चरित्र, परिच्छेद वा सरल वाक्यांश जुन हामीले मेटाएका छौं वा बिर्सेका छौँ र त्यो मेमोरीबाट जम्प हुन्छ नयाँ स्ट्रोक, गन्ध, छवि वा aftertaste.
वा यसले हामीलाई अचम्मित गर्दछ हाम्रो आँखा अब पढ्न तरिका के समयमा त्यो एक प्रकाश थियो। राम्रो वा खराबको लागि। तर हामीले त्यो आश्चर्य फर्कायौं।
जादू एक अवधारणा हो कि पछाडि झुकाव हुन्छ एक पठनको समयमा। फेरी, सायद मेमोरी सामग्रीमा हामीमाथि ट्रिकहरू खेल्न सक्छ। पीतर जादू तब रहे र हामी यसलाई पुन: अनुभव गर्न चाहन्छौं। हामी यसलाई सम्झन्छौं। त्यो शीर्षक थियो। तपाईंले यसलाई हराउनु हुँदैन। तपाईंले भर्खरै यसलाई पुन: प्राप्ति गर्नुपर्नेछ वा यसलाई अन्य बारीकाहरू, अन्य अनुच्छेदहरू वा अन्य वर्णहरूमा पत्ता लगाउनु पर्दछ।
यद्यपि यो धेरै सम्भव छ कि यो अपठित रूपमा यो पुनर्निर्माणमा हरायो। त्यसपछि यो आउँछ निराशा वा उदासी। तर जादू सँधै अवस्थित हुनेछ। नयाँ पठन आउँनेछ र त्यो हिज्जे फेरि आउनेछ।
चिन्ता र भीड
किनकि त्यहाँ त्यस्ता पुस्तकहरू छन् जुन हामी पढ्छौं एक लामो सास मा। वा किनभने हामी यसलाई खोज्दै थियौं र हामी यसलाई समात्नको लागि पुस्तक पसलमा उड्यौं र केही दिनमै पढ्ने रेकर्ड तोड्यौं। सबै माथि शीर्ष, यो हुन सक्छ कि हामीलाई थोरै चिन्नुहोस् र हामीले यसलाई फेरि खानु भनेर फेरि सुरु गरेका थियौं। त्यहाँ तिनीहरू छन् जो सामर्थ्यशाली छन् र केही समयको लागि बाहिर रोक्न सक्छन्, तर तिनीहरू जान्दछन् कि चाँडै वा पछि त्यो किताबको टुक्रा फेरि खस्नेछ।
र यो यो हो कि ती निश्चित रूपमा ती हुन् किताबका टुक्राहरू। त्यो साबुन ओपेरा जुन तपाईंले मे पानी जस्तो आशा गर्नुभयो र वास्तवमा यसले तपाईंलाई निराश बनाएको छैन। भर्खरको वा विगत त्यहाँ ती पुस्तकहरू छन् त्यो असफल हुँदैन र जो फेरि र फेरि फर्कन्छन्। र पुन: पठनको बीचमा फरक पर्दैन। तिनीहरूसँग सबै छ र तिनीहरू जादू र आश्चर्य कायम राख्नको लागि व्यवस्थापन गर्छन्। त्यहाँ कुनै भीड वा चिन्ता छैन किनभने त्यहाँ खुशी मात्र छ। मनपर्ने प्यासेजहरू, प्रशंसित पात्रहरू, गोल प्लट ...
केहि परिवर्तन हुँदैन, केवल त्यो रमाइलोमा मनोरन्जनको आनन्द। त्यो रोमाञ्चक वा डरलाग्दो क्षणमा फर्कनुहोस्, सब भन्दा रोमान्टिक वा सबैभन्दा दुखद पल। बारम्बार मुख्य पात्रहरूको अवतारहरू, उनीहरूको शोक वा तिनीहरूको आनन्दहरू पढ्नुहोस्। कि चरमोत्कर्षमा पुग्नुहोस् र यो उस्तै भावना हो जस्तो लाग्छ वा, यदि होईन भने त्यो अझ ठूलो हो किनकि समय र तपाईंको आँखाले यसलाई अर्को तरिकाले पुन: सिर्जना गर्दछ।
त्यसोभए तपाईं के भन्नुहुन्छ? ¿पुनः पढ्नुहोस्? तपाईं गर्नुहुन्छहोइन? कुन हो तपाईका किताबहरु हजार पुन: पठनको? वा ती तपाईले फेरि कहिल्यै छुनु हुने छैन?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » पुनः पढ्दै। Reasons कारणहरू किन हामी यो गर्छौं। कि हैन।
अरासेली रियरा फेरेर भन्यो
धेरै राम्रो लेख !!!! तपाईले टाउकोमा नेललाई प्रहार गर्नुभयो एउटा कारणले मैले केही शीर्षकहरू पुनः पढें: चिन्ता र हतार। जहाँसम्म मलाई थाहा छ, त्यहाँ दुईवटा पुस्तकहरू छन् जुन मैले भर्खरै समाप्त गरेको छु र फेरि सुरू गरेको छु।
Araceli Riera Ferrer लाई जवाफ दिनुहोस्
हो, कारणहरू सामान्यतया सहमत छन्, हैन?
मेरो मामला मा यो उमेर छ। मैले पुस्तकहरू "दायित्व बाहिर" पढेको छु। त्यस समयमा मैले तिनीहरूलाई फेरि पढ्ने वाचा गरेको थिएँ, पहिले नै गठन गरिएको मापदण्डको साथ। र मैले तिनीहरूलाई sooo धेरै मन पराएको छु।
हो, त्यो मलाई एक पटक पनि भएको छ। तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद।
Essential आवश्यक पुस्तकहरू जुन अझै हामीलाई उत्कृष्ट पाठ दिन्छ